Fizahan-tany amin'ny fampakaram-bady: Fiainana vaovao amin'ny dia sy ny fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana » Fizahan-tany amin'ny fampakaram-bady: Fiainana vaovao amin'ny dia sy ny fizahan-tany
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Tourism • Travel Wire News
Miroborobo ny tsenan'ny Wedding Planning, ary mety ho ny sehatry ny fizahan-tany ilaina hamelomana indray ny indostrian'ny dia aorian'ny areti-mifindra.
Ny tsenan'ny fampakaram-bady eran-tany dia antenaina hiakatra be mandritra ny vanim-potoana vinavina, eo anelanelan'ny 2021 sy 2025.
Tamin'ny taona 2021, ny tsenan'ny Wedding Planning dia nitombo tamin'ny tahan'ny tsy miovaova.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny paikady ataon'ireo mpilalao fototra, ny tsena dia antenaina hiakatra amin'ny faravodilanitra novinavinaina.
Nancy Barkley, mpandrindra ny fizahantany fampakaram-bady ho an'ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN) dia niaro fa ny Wedding Tourism dia mila fankasitrahana bebe kokoa satria manan-danja amin'ny toekaren'ny toerana iray. Nitehaka ny Market Watch Newsroom izy tamin'ny fanasokajiana izany tamin'ny famoahana an-gazety farany azy, "Tsenan'ny drafitra fampakaram-bady 2021 Fizarana maneran-tany, habe, fitakiana ho avy, fikarohana eran-tany, mpilalao ambony indrindra, fironana mipoitra, faritra amin'ny vinavina hatramin'ny 2025."
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, nanomboka niparitaka nanerana izao tontolo izao ny aretina COVID-19, olona an-tapitrisany eran-tany no voan'ny aretina COVID-19, ary ireo firenena lehibe eran'izao tontolo izao dia nampihatra ny fandrarana ny tongotra sy ny baiko fampiatoana ny asa. Afa-tsy ny indostrian'ny famatsiana ara-pitsaboana sy ny vokatra fanohanana aina, ny ankamaroan'ny indostria dia voadona mafy, ary ny indostrian'ny Benomyl dia voa mafy ihany koa.
Ny tatitry ny Global "Tsena Fandrafetana ny fampakaram-bady" (2021-2025) dia mirakitra ny angon'ny mpanamboatra, ao anatin'izany ny fandefasana, ny vidiny, ny fidiram-bola, ny tombony lehibe, ny firaketana an-tsoratra, ny fizarana orinasa, sns., izay manampy ny mpanjifa hahafantatra bebe kokoa momba ny mpifaninana. Ity tatitra ity koa dia mirakitra ny faritra rehetra sy firenena manerantany, izay mampiseho ny satan'ny fampandrosoana isam-paritra, ao anatin'izany ny haben'ny tsena, ny volume ary ny sandany, ary koa ny angon-drakitra momba ny vidiny.
Ankoatr'izay, ny tatitra dia mirakitra ny angon-drakitra fizarana, ao anatin'izany ny fizarana karazana, fizarana indostrialy, fizarana fantsona sns. Izy io koa dia mirakitra ny fampahalalana momba ny mpanjifa isan-karazany, izay tena zava-dehibe ho an'ny mpanamboatra.
Eran-tany "Tsena fandrindrana fampakaram-bady" (2021-2025) dia manolotra scenario sy fahatsinjovana fitomboana amin'ny famakafakana pin-point ho an'ny fanovana ny dinamika mifaninana sy ny fomba fijery mibanjina amin'ny anton-javatra samihafa mitondra na manakana ny fitomboan'ny indostria. Ny tsenan'ny fampakaram-bady dia manolotra famakafakana lalina momba ny haben'ny tsena, ny fizarana, ny fitomboana, ny habaka ary ny fomba fijery ny indostrian'ny fampakaram-bady. Ity tatitra ity dia manome ny fampahalalana ilaina rehetra ilaina mba hahatakarana ny fivoarana lehibe amin'ny fandaniana amin'ny tsena amin'ny tsenan'ny Wedding Planning sy ny fironana fanitarana isaky ny faritra sy faritra. Ny fandalinana dia mizara ny fahombiazan'ny tsenan'ny Wedding Planning na eo amin'ny resaka volume sy ny vola miditra ary io antony io izay mahasoa sy manampy amin'ny orinasa. Mahazoa PDF santionany amin'ny tatitra.
Mba hahafantarana ny fiantraikan'ny valan'aretina COVID-19 amin'ny tsenan'ny fandrindrana mariazy/indostria, mangataha dika mitovy amin'ny tatitra.
Momba ny World Tourism Network
World Tourism Network (WTN) no feo efa ela be ho an'ireo orinasa fitsangatsanganana madinika sy salantsalany eran'izao tontolo izao. Amin’ny alalan’ny ezaka fampiraisana no entiny misongadina ny filana sy hetahetan’ny orinasa madinika sy salantsalany ary ireo mpiara-miombon’antoka aminy. Ny World Tourism Network dia nipoitra avy amin'ny resaka rebuilding.travel. Nanomboka tamin'ny 5 martsa 2020 teo amin'ny sisin'ny ITB Berlin ny dinika rebuilding.travel. Nofoanana ny ITB, saingy natomboka tao amin'ny Grand Hyatt Hotel any Berlin ny rebuilding.travel. Tamin'ny volana Desambra, nitohy ny rebuilding.travel saingy natsangana tao anatin'ny fikambanana vaovao antsoina hoe World Tourism Network. Amin'ny fampivondronana ireo mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny daholobe eo amin'ny sehatra isam-paritra sy maneran-tany, ny WTN dia tsy miaro ny mpikambana ao aminy fotsiny fa manome feo azy ireo amin'ny fivoriana fizahan-tany lehibe. Ny WTN dia manome fahafahana sy tambajotra tena ilaina ho an'ireo mpikambana ao aminy any amin'ny firenena 120 mahery. Tsindrio eto raha te ho mpikambana.